ပီပြင်တဲ့ရှမ်းအရသာစစ်စစ်ကို ရှမ်းရိုးရာမှာမြည်းစမ်းခံစားလို့ရတယ်နော် – FoodiesNavi
By yin sandi On April 18, 2018 0
မြန်မာတိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေထဲက ရှမ်းအစားအစာတွေကို မြန်မာတွေသာမက နိုင်ငံခြားသားတွေပါကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ချိုချဉ်ငံစပ်ခါးမျှတပြီး လူတိုင်းရဲ့ခံတွင်းနဲ့အကြိုက်တွေ့စေနိုင်တာကြောင့် ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တောင် ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်တွေတော်တော်လေးပေါများလှပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်တွေထဲက ရှမ်းအရသာစစ်စစ်ကိုရရှိပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်ခမ်းခမ်းနားနားအပြင်အဆင်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမက နိုင်ငံခြားသားများပါ မပြတ်စည်ကားနေတတ်တဲ့ Sulae Square ကရှမ်းရိုးရာဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းကို Review လေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆိုင်လေးကတော့ Sulae Square ကနေဝင်ဝင်ချင်း ပထမထပ်ကိုတက်သွားလိုက်တာနဲ့ စက်လှေကားထိပ်မှာပဲတည်ရှိနေတာဆိုတော့ အထွေအထူးလိုက်ရှာနေစရာမလိုပါဘူး။ Sulae Square မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဆိုကတည်းက ခမ်းနားသပ်ရပ်တဲ့ဆိုင်အပြင်အဆင်တွေကို ပြောပြနေစရာတောင်မလိုပါဘူးနော်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေက ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေဆင်မြန်းထားပြီး ရှမ်းရိုးရာအထိမ်းအမှတ်အရုပ်လေးတွေ အလှဆင်ထားတာကြောင့် ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်လို့ပြောနေစရာမလိုအောင် ရှမ်းအငွေ့အသက်တွေကိုခံစားရရှိစေပါတယ်။
အက်မင်တို့က အဖွဲ့လိုက်သွားစားကြတာဆိုတော့ တစ်ပွဲချင်းစီမှာမနေတော့ဘဲ ထမင်းတစ်လုံးစီနဲ့ ဟင်းပွဲတွေပဲစုပြီးမှာစားဖြစ်တယ်။ ၁၂ပန်းနားအာလူးကြော်ကတော့ အာလူးချောင်းသေးသေးလေးတွေလှီးပြီး ထွေးထွေးလေးကြော်ပေးထားတာ အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ပေါ့ပေါ့လေးကြော်ထားတာက စားကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆီသန့်မှန်းသိပ်သိသာတယ်။ ဆီမသန့်ရင်လည်ချောင်းထဲ ချွဲကပ်သလိုဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်အတွက်ဆီသန့်တာကိုတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ နည်းနည်းပေါ့တယ်လို့ခံစားရပေမယ့် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်လေးနဲ့ တွဲဖက်ပေးထားတော့ မပေါ့တော့ဘဲအရသာချဉ်ချဉ် မကြွပ်မရွလေးနဲ့ တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်။
ကြက်သားအော်ဇွန်းသုပ်ကတော့ သခွားသီး ၊ မုန်လာဥနီလေးတွေကိုပါးပါးလေးတွေခြစ်ပြီး ကြက်သားကြော်လေးတွေနဲ့ရောသုပ်ပေးထားတာ။ သံပုရာနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ အသီးအရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတွေ ရောသုပ်ပေးထားကြောင့် စားကြည့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးခံတွင်းရှင်းသွားတယ်။ အသီးအရွက်ကြိုက်သူတွေတော့ တော်တော်လေးကြိုက်မှာသေချာတယ်။ အရသာကကောင်းပေမယ့် ကိုယ်ကပဲအငံကြိုက်လို့လားမသိ နည်းနည်းပေါ့တယ်လို့ထင်တယ်။
ကက္ကတစ်မန်ကျည်းသီးဆော့စ်ကတော့ ရှမ်းရိုးရာမှာကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ မွမွကြွပ်ကြွပ်ကြော်ထားတဲ့ ငါးအသားအရသာလေးတွေက ငါးအရသာလို့မထင်ရလောက်အောင် တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်။ မန်ကျည်းဆော့စ်လေးဆမ်းထားတာကလည်း ငါးကြော်ရဲ့ချိုမြတဲ့အရသာကို ချိုချဉ်အရသာလေးဖြစ်သွားစေပြီး မအီမနောက်ဘဲ ပန်းကန်စောင်းလေးမှာပုံပေးထားတဲ့ နံနံပင်ကြော်လေးပါကိုက်ကိုက်စားလိုက်တော့ ခံတွင်းတစ်ခုလုံးအရသာဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီး ပွင့်ထွက်သွားသလိုပဲ။ ကိုယ်ပဲခံတွင်းတွေ့နေသလားဆိုပြီး ? ? ဘေးကသူငယ်ချင်းကြည့်လိုက်တာ သူတို့လည်းဒီဟင်းချည်းအပီဆွဲနေတော့ မနည်းလုစားလိုက်ရတယ် ? ?
မိုင်းသောက်ခရမ်းချဉ်သီးချက်ကတော့ ကျောက်စိမ်းခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေကို ကြက်သားလေးတွေထဲစိမ့်ဝင်နေအောင် ပျစ်ပျစ်လေးချက်ပေးထားတာကြောင့် ကြက်သားမျှင်လေးတွေဝါးစားလိုက်ရင်တောင် ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့အနှစ်အရသာကို ခံစားမိစေပါတယ်။ ဟင်းအရည်လေးတွေကလည်း ဆီပြန်ဟင်းတွေဖြစ်မနေဘဲ ဆီနည်းနည်းနဲ့အရည်များများလေးဆိုတော့ ခပ်သောက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထမင်းထဲဆမ်းစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် စားရတာပိုမြိန်တယ်။
ရှမ်းသီးရွက်စုံကြော်နဲ့ ကိုယ်ခံတွင်းနဲ့သိပ်မလိုက်ဘူးထင်တယ် ။ စားရတာအရသာသိပ်မတွေ့လှဘူး ။ တော်တော်လေးပေါ့တယ်။ အရွက်အသီးတွေကလတ်ဆတ်နေပေမယ့် အရသာစိမ့်ဝင်မှုနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျန်တာတွေယှဉ်ရင်တော့ ဒီဟင်းလေးကိုသိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်။
ဟင်းလျာတိုင်းမှာတော့ ရှမ်းရိုးရာဟင်းလျာတွေလို့ပြောစရာမလိုအောင် ရှမ်းအငွေ့အသက်တွေကအပြည့်အဝပဲ။ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတွေကို ဧည့်ခံချင်လို့ဆိုင်လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ရှမ်းရိုးရာကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ နေရာအခင်းအကျင်းအပြင်အဆင်တွေက VIP တွေကိုဧည့်ခံရင် တင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့ လုံးဝမျက်နှာမငယ်ရစေမယ့်ဆိုင်ဆိုတာ လုံးဝအသေအချာပါပဲနော်။
In Reviews Leaveacomment
မိုးကုတ်မှာကိုယ်တိုင်သွားစားနေသလို မိုးကုတ်ဒေသလက်ရာတွေအတိုင်း သုံးဆောင်နိုင်မယ့်